State Counsellor receives Member of House of Representatives, National Diet of Japan – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor receives Member of House of Representatives, National Diet of Japan
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi received the delegation led by Mr Masahito Moriyama, Member of the House of Representatives, National Diet of Japan, at 10 am yesterday at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw.
During the meeting, they exchanged views on matters relating to Japanese development assistance in Myanmar, mitigation of natural disasters in Myanmar, vocational training programmes and educational reforms, provision of the functional prosthetics, education and creation of job opportunities for people with disabilities in Myanmar, and Japan’s continued support towards Myanmar’s democratization process.
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂျပန်နိုင်ငံ၊ လွှတ်တော်၏ အောက်လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ မာစာဟီတို မိုရီယာမ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ လွှတ်တော်၏ အောက်လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ မာစာဟီတို မိုရီယာမ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၀ဝ၀ နာရီ အချိန်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကူအညီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများဖော်ဆောင်ရေးကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဟန့်တားလျော့ချသွားရေးကိစ္စ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေး အစီအစဉ်များနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်စွမ်းသူများ အသုံးပြုရန်အတွက် ခြေတုလက်တုများ တပ်ဆင်ပေးသွားနိုင်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသွားရေးကိစ္စနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။